Banyere Anyị - Ningbo Zhongyi Plastic Co., Ltd
Ningbo Zhongyi Plastic Technology Co., Ltd bụ otu ọkachamara emeputa maka plastic ngwaahịa na a Mmepụta maka Ebu. Anyị na-e mere onwe anyị ka nnyocha, imewe na ahịa nke recyclable logistic ngwugwu eji ngwaahịa, na-enyere iji dochie otu oge ngwugwu na imegharị ihe maka iji ihe nkwakọ usoro. Nzube anyị na-enye elu àgwà na eco-enyi na enyi ngwaahịa na ibu ọrụ ndị ahịa dabeere ma na China na esenidụt na okwu nke warehousing, nkesa na recyclable njem usoro. The nnyocha na ogbugbu nke plastic logistic totes na-eme ka anyị na-uru ọnọdụ anyị ụlọ ọrụ. Ka ọ dịgodị, anyị na-ele anya na-enye pụrụ iche imewe amụma n'ihi na pụrụ iche ọrụ na ndị ahịa. Anyị na ngwaahịa a na-ere dị ka Germany, na Netherlands, Belgium, US, HK, wdg
Anyị nwere n'elu 20 kọmputa na-achịkwa plastic injectors na ikike nke 100-10000 gram. Anyị nwetara 6 ngalaba melite, mmepụta ngalaba, R & D (n'ihi na ihe ọhụrụ dị & CAD / cam ebu), ibubata & mbupụ, anụ ụlọ ahia, QC, nkwakọba & njem. Anyị nwetara ezi ike nke n'ichepụta na nkwakọba & njem. Kwa afọ ike maka tote mmepụta akụrisị 8 ọtụtụ nde na nkezi kwa afọ ike bụ ka elu dị ka 20000 tọn.
Ụkpụrụ nduzi anyị bụ "ndị mmadụ, Innovation na Quality". Anyị nwere olileanya na anyị nwere ike igosi na-okwu na enyi na enyi ahịa mmekọrịta na ahịa n'ụwa nile maka ibe mmasị.